Kusvibisa kwevhu: zvinokonzera uye mhedzisiro | Green Renewables
Zvinokonzera uye mhedzisiro yekusvibiswa kwevhu
Tomàs Bigardà | | Updated on 05/04/2019 14:32 | Kurima kwezvakatipoteredza, Ecology
La kusvibiswa kwevhu kana kushandurwa kwehunhu hwenyika kuri nekuda kwezvikonzero zvakasiyana uye mhedzisiro yacho inowanzo kukonzera matambudziko akakomba anokanganisa maruva, mhuka kana hutano hwevanhu kwenguva yakareba.
Kubudikidza nekurima ndiyo imwe yenzira iyo ecosystem isina kuenzana, inosvibisa mvura yekunwa kana mvura yemadiridziro, zvinoreva kuti dambudziko iri harigone kugadziriswa nguva dzese uye dzimwe nguva chikamu chekukuvara chinogona kugadziriswa. Asi,chii chinokonzera kukonzera kusvibiswa kwevhu uye zvingagadziriswa sei?
1 Zvinokonzera kusvibiswa kwevhu
1.1 Kuvhara pasi muSpain
1.2 Ercros inodurura muFlix
1.3 Yakareba runyorwa
2 Mhando dzetsvina
3 Migumisiro yekusvibiswa kwevhu
3.1 Chernobyl makore makumi matatu gare gare
4 Kugadzirisa kusvibiswa kwevhu
4.1 Iva nehutano hwakanaka hwekutakura vanhu
4.2 Kushandisa mota dzemagetsi
4.3 Dzivisa kuva nemotokari yako inomhanya kwenguva refu kana ichimira
4.4 Chengetedza mota yako mune yakanaka
4.5 Batsira kudzivirira kutemwa kwemasango
4.6 Sarudza zvimwe zvezvinhu zvakasikwa.
4.7 Mapurasitiki epurasitiki
4.8 Kururamisa kurongeka kwemarara
Zvinokonzera kusvibiswa kwevhu
Izvo zvinokonzera kusvibiswa kwevhu zvakasiyana, muenzaniso ndewe zvinhu zvine chepfu pasi pevhu zvinopedzisira zvasvibisa mvura yepasi inozoshandiswa kudiridza, kunwa kana kupedzisira yaisa chepfu kwatiri kuburikidza neketani yechikafu. Maitiro anokwanisa kuzvisvibisa isu pachedu nezvose zvinotikomberedza, uye dambudziko hombe nderekuti zvinotora mazera mashoma kuti agadzirise zvatakakonzera mukuyedza uku kuburitsa musina kufunga nezve izvo zvichauya mumashure. isu.
Kukurukura nenzvimbo yakasvibiswa hakuwanzo kunanga nguva dzose. Ndozvinoitika kana vavigwa zvinhu zvine chepfu pasi pevhu uye izvi zvinopedzisira zvasvibisa mvura yepasi iyo inoshandiswa kudiridza, kunwa kana kupedzisira yaisa chepfu kwatiri kuburikidza ne chain chain, nekudya hove, huku kana chero imwe mhuka yakasvibiswa.
Iko kukanganisa kwakashata kwemarara, kurasika kwayo nemaune kana netsaona (Kufanana nekambani yeErcros muFlix), iko kuunganidzwa kwe marara pamusoro payo kana kuvigwa zvimwe chete (Zvizhinji zvekurasa muSpain), pamwe nekudonha mumatangi kana madhipi nekuda kwekuparara, zvivakwa zvisina kunaka ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvacho zvikuru.
Uye, hatisi kungogara pano kubva ipapo rondedzero yacho yakawedzeredzwa nematambudziko "madiki" senge kubuda radioactive, kushandiswa kwakanyanya kwemishonga yekuuraya zvipuka, kuchera, indasitiri yemakemikari kana zvimwe chete zvekuvakisa zvinoshandiswa nhasi tisingazive kukanganisa kwazvinoita.
Kuvhara pasi muSpain
Iko kushoma kutariswa uko Spain inobhadhara kudzokorodza uye kuchengetedza nharaunda nhasi kunonyadzisa pamberi peEuropean Union, asi zvinotyisidzira kuva sosi yemamirionea faindi mumakore anotevera. Brussels ine hurongwa hwekuda kudzokorodza: ​​muna 2020, nyika dzayo dzose dzenhengo dzichafanirwa kudzokorora 50% yemarara avo, uye Komisheni yave kuda kubvumidza kusvika 70% muna 2030. Zvisinei, Spain haisati yadzokororazve nhasi 33% yemarara ako uye kufambira mberi kwacho kushoma. Kwete kunyange inotarisira tariro kuti nyika yedu ichaita basa rayo mukati memakore matatu.
Yekutanga yekumutsa yekumuka yatouya muchimiro chemutongo wakapetwa kubva kuDare reJustice reEuropean Union (CJEU), uyo unoshora Spain nekuvapo nekusiya zvachose 88 marara epasi asingadzorwe. Yekutanga yakaburitswa muna Kukadzi 2016 uye yakaratidza makumi mana nematanhatu ekurasa marara anga achiri kushanda kana asina kuvharwa mushure mekuvharwa. Wechipiri akasvika mazuva mashoma apfuura uye anoisa munwe mune imwe 27 landfills, 61% yacho inogovaniswa pakati peCanary Islands neCastilla y León.
Sekureva kwehunyanzvi hwakasiyana-siyana, zvekurasa marara mabhomba ane nguva-refu. Kana dzangovharwa, dzinofanirwa kudzorwa nharaunda Kwemakore gumi nematatu, kuongorora pasi pevhu uye nekubuda mumhepo, nekuti kuora maitiro hakumiswe nekuvhara gomba.
Nzvimbo zhinji dzepamutemo dzakaputirwa nemamirimita matatu e polyethylene, iine chipingaidzo chevhu mune akanakisa kesi, asi anowanzo purwa negasi nekufamba kwepasi. «Iwo njodzi yeruzhinji. Hofisi dzinohwanda kubva pachokwadi chekuti mazhinji ane marara emvura chete, asi chenjera zvakanyanya nekuparadza uye zvekuvakisa, senge asbestosi kana pombi dzemutobvu, idzo dzakaratidzwa ivo vane carcinogenic»
Ercros inodurura muFlix
Dhamu reFlix, mudunhu reCatalan reTarragona, raona inopfuura zana ramakore rezvirasiro uye kusvibiswa kwevhu nemakemikari anoramba aripo, anowedzera uye ane chepfu nefekitori yemakemikari yekambani yeErcros. Izvi zvakakonzera kusvibiswa rwizi rwakazara Ebro, kubva ipapo kusvika pamuromo.
Zvinosvibisa zvinosanganisira simbi dzinorema senge mercury uye cadmium, kana chepfu uye inoramba iripo organochlorine macomputer akadai hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls (PCBs) kana DDT nema metabolites avo.
“Ercros, inoonekwa seinosvibisa makemikari murwizi rweEbro, yave nemakore ichinetseka kuti isabhadhare mari yekuchenesa rwizi, inova ndiyo sosi yakakosha yemvura yekunwa. Iyo fekitori yeEcrcros iri padyo neguta reFlix, iro rinopa zita raro kune dhamu rakabatwa nekusvibiswa kweErcros SA, yaimbove Erkimia, kwainogadzira nekutengesa. zvigadzirwa zvekutanga zvemakemikari uye mishonga indasitiri.
Nehurombo, iro rondedzero rakareba, rinenge risingaperi. Tinogona kudoma zvimwe zvakawanda zvakakosha zvakaenzana, senge kuchera (zvishandiso zvakaita se mercury, cadmium, mhangura, arsenic, lead), indasitiri yemakemikari, radioactive idonhedza, kushandiswa kwakanyanya kwemishonga yekuuraya zvipuka, kusvibiswa kubva kuinjini dzinotsva, utsi kubva mumaindasitiri, zvekuvakisa, kupisa kwemafuta (marasha, mafuta uye gasi), tsvina yakare mune yakashata pakati pevamwe.
Tinogona kuona kuti kune akakura akasiyana masosi enzvimbo yekusvibiswa kwevhu, izvo zvinokonzeresa kune dzakawanda nguva zvakaoma kuwana, sezvo zvinosvibisa zvichikwanisa kusvika kumiti kana mhuka kana, kusvibisa mvura munzira dzakasiyana siyana, asi kwete nguva dzose hazvina basa.
Mune hutsinye chaihwo ndeyekuti kune zvakawanda zvakakonzera, iyo inowanzo taura inokonzeresa kusagadzikana mukuyedza kutsvaga izvo zvavari, nekuti ibasa rakaoma. Zvinoita sekunge mumba medu tanga tanga nekubuda makumi maviri uye hatina kukwanisa kuona kwadziri uye nekudzipedza kana kuzvigadzirisa. Dambudziko rekuti pano haisi imba yedu, ipuraneti redu iro riri panjodzi
Imwe yematambudziko makuru ndeyekuti kune zvakawanda zvakakonzera, iyo inowanzo taura inokonzeresa kusagadzikana mukuyedza kutsvaga izvo zvavari, nekuti ibasa rakaoma. Zvinoita sekunge mumba medu tanga tanga nekubuda makumi maviri uye hatina kukwanisa kuona kwadziri uye nekudzipedza kana kuzvigadzirisa. Dambudziko rekuti pano haisi imba yedu, ipuraneti redu iro riri panjodzi.
Zvigadzirwa zvine njodzi: Kuchenesa zvigadzirwa, pendi, mishonga uye mabhatiri zvine chepfu zvakanyanya. Izvi zvigadzirwa zvinoda mushandirapamwe wekuunganidza usingagumi munzvimbo dzisina kudzorwa marara uko kwavanogona kukonzera njodzi dzezvakatipoteredza nekusvibisa mvura nevhu.
Matura ndeimwe yeiyo zvigadzirwa zvine njodzi zvine chepfu yeiyo mercury uye cadmium zvemukati. Kana mabhatiri apera uye akaunganidzwa mumatope kana kupiswa, iyo mercury inobvumidzwa kutiza, uye nekukurumidza kana gare gare inopinda mumvura. Mercury inonwiwa neplankton uye algae, kubva pane izvi kuenda kuhove uye kubva kune izvi kumunhu. Bhatani sero rinogona kusvibisa 600.000 litita. yemvura. Mishonga ine zvinhu zvine chepfu izvo zvinogona zvakare kupinda mukati metaipi uye kupinda mumvura, kuisvibisa.
Domiciliary: marara kubva kudzimba uye / kana nharaunda.
Industrial: kwayakatangira ndicho chigadzirwa chekugadzira kana shanduko yezvinhu zvakasvibirira.
Kugamuchira vaeni zvakanaka: marara ayo anowanzo kuverengerwa semarara ane njodzi uye anogona kunge ari ega uye asina kujairika.
Zvebhizimisi: kubva kumabiko, mahofisi, zvitoro, nezvimwewo, uye kugadzirwa kwavo kuri kwehupenyu, senge zvakasara zvemichero, miriwo, kadhibhodhi, mapepa, nezvimwe.
Marara emuguta: inoenderana nevanhu, senge tsvina kubva mumapaki uye mapindu, fenicha yemaguta isingabatsiri, nezvimwe.
Space marara: satellites uye zvimwe zvigadzirwa zvevanhu mavambo izvo, vachiri muPasi kutenderera, vatopedza hupenyu hwavo hunobatsira.
Mapurasitiki epurasitiki mugungwa idambudziko rakakomba renharaunda
Migumisiro yekusvibiswa kwevhu
La kusvibiswa kwevhu inomiririra mhedzisiro yemhedzisiro uye zvinokuvadza pamurume, pamwe nemusango nemhuka zvakajairika. Mhando dzakasiyana dzehuturu hunokanganisa zvakanyanya zvinoenderana nechinhu chimwe nechimwe icho hutano hwevhu hwakashatiswa.
Yokutanga mhedzisiro Iko kusvibiswa kunokanganisa zvinomera, zvirimwa zvakashatiswa uye mhando dzakasiyana dzemhando dzakadzikiswa zvakanyanya, izvo zvichiri kurarama zvichaunza zvisina kusimba maitiro uye maitiro avo echisikigo anozooma.
Kusvibiswa kwevhu kunotadzisa kukura kwehupenyu hweiyo nyamaPasina chikafu kana mvura yakachena, zvipenyu zvinofamba kana kutambura kukuvara kusingagadzirisike muketani yavo yekubereka. Nemaitiro aya saka izvo zvinonzi "nzvimbo kudzikisira" uye nekudaro "kurasikirwa muhuwandu hwepasi", Mabasa ekurima anomira, mhuka dzinonyangarika uye ivhu harina basa.
Kurasikirwa kwehunhu hwepasi kunosanganisira mhedzisiro yemhedzisiro yakaipa kubva pairi kudzikira, sezvatichangobva kutaura, kunyangwe zvisingaite zvekushandisa kuvaka, kurima kana, zvakapusa uye zvakapusa, kugadziridza ecosystem.
Mhedzisiro yacho inogona kutambudzwa chinyararire, ichikonzera a kugara uchidonha kwevanobatwa, ingave yemunhu kana yemhuka nemhando dzemiti
Muenzaniso wakajeka yaive yeChernobyl nyukireya magetsi, kana ichangoburwa radioactive inodonha kubva kumuti weJapan de Fukushima, sezvo kusvibiswa kwevhu kwakakanganisa kurima, zvipfuyo uye hove. Yakatowanikwa marara ane mwaranzi kubva kumahombekombe kubva kuFukushima, kunyanya pasi pegungwa kubva pakudonha kumwechete, maererano nezvakasiyana zvidzidzo neInstitute of Industrial Sayenzi yeYunivhesiti yeTokyo, iyo University yeKanazawa uye National Research Institute.
Kune rimwe divi, pamwe nekukanganisa kunzwisisika kwenzvimbo nekuda kwekushaikwa kweiyo ecosystem, kazhinji kurasikirwa kusingachinjiki, kusvibiswa kwevhu kunoreva Mamirionea anorasikirwa nekudzivirira kushandiswa kweiyi nharaunda nharaunda nevanhu vemo kana vemaindasitiri varimi.
Chernobyl makore makumi matatu gare gare
Mumakore makumi matatu kubvira tsaona yeChernobyl yenyukireya, komunisiti yakawa, Soviet Union ikaparara, uye paive neakatowanda shanduko mbiri uye ichiri kurasika uye isina kupera hondo muUkraine.
Panyaya yenguva yenhoroondo, zvinoita sekunge nyika yatendeuka zvakanyanya kupfuura zvakafanira kubva mangwanani ane njodzi, umo boka revanyanzvi rakapuridzira reactor nhamba yechina yemagetsi magetsi. Vladimir Lenin, zvisinei nekuti ivo vaiita bvunzo yaifanirwa kusimbisa kuchengetedzeka kwavo.
Asi kune zvakatipoteredza - mweya, mvura, ivhu pamwe nezvose zvakararama uye zvichararama mariri - zvinoita sekunge mawachi ewachi haana kunyatsofamba. Iyo Kusvibiswa kweRadioactive ivhu kunotora zviuru zvemakore kudzikisira. Saka makumi matatu emakore hapana kana zvasvika padambudziko rakaipisisa renyukireya.
Chernobyl ichiripo mumichero yemusango uye howa, mumukaka nemukaka zvigadzirwa, munyama nehove, mugorosi. Uye muhuni inoshandiswa kugadzira moto uye mumadota akasara mumashure. Mune mamwe mazwi, mune hutano hwevanhu vese. Chinhu chine mutoro - kunyangwe nanhasi - chinenge chiri chekuenda kumusika ne Geiger kaunda, iwo madiki michina anoita ruzha runopenga pavanosvika paredhiyo, kuti uzive kana zvigadzirwa zvauchatora patafura yako zvine mwero wakakodzera wekuchengetedza kudyiwa.
Kugadzirisa kusvibiswa kwevhu
Kudzivirira ndiko mhinduro yakanakisa yezvose, dzidzisai mudiki kupa. Kubva pakurasa marara munzvimbo yako kuenda kunotora chikamu munharaunda yekuchenesa-dhiraivha.
Asi zvakare ichokwadi kuti haugone kugara (uye usingade) kudzivirira kusvibiswa kwevhu. Dzimwe nguva tsaona dzinoitika, zvichiita kuti zvive zvakaoma kudzora, apo zvisingaiti.
Kana tikaenda takananga kumudzi wedambudziko, a shanduko huru mumhando yekugadzira kana kurambidzwa kweimwe miitiro sechiitiko cheimwe maindasitiri anogadzira tsvina ine chepfu, kucherwa kwemigodhi, kushandiswa kwefetiraiza yekugadzira yakavakirwa pamafuta.
Nehurombo, idzi sarudzo hadzisi chinhu kunze kwekurota. Naizvozvo, mukutarisana nefait accompli, mhinduro dzinotsvakwa dzinotangira pakuchenesa nzvimbo kusvika kune zvakapfava nzvimbo yakakuvadzwa uye iyo kurambidza kushandiswa kwayo kune zvimwe zviitiko. Muzviitiko zvakakomba, senge Fukushima kana Chernobyl, nzvimbo dzakakanganiswa hadzina kukodzera hupenyu hwevanhu.
Uye, sezvo kusvibiswa kwakawedzera mumakumi emakore apfuura nekuda kwekugadzirwa kwemaindasitiri nekusimudzira kwemaguta, mhinduro dzinouya chaizvo kubva mukutonga kwezvinhu izvi. Tsika, zviito zvakanangana nekuvandudza marara zvakare kudzikisira kusvibiswa kwevhu uye, panguva imwe chete, nemvura, sezvo ichipedzisira yaisvibisa.
Soil bioremediation zano rinotsvaga kudzoreredza zvakashatiswa ecosystems vachishandisa zvipenyu, senge mabhakitiriya, zvirimwa, fungi ... Zvichienderana nerudzi rwehutachiona hwaunoda kurwisa, imwe kana imwe mumiririri ichashandiswa bioremediator. Iko mashandisiro ayo akafara, ine mhedzisiro inonakidza muvhu rakasvibiswa ne radioactivity kana, semuenzaniso, nemabasa ekuchera.
Semaitiro akanaka, marara akakwana marara nekurapa marara, iyo kuitwa kwesimba rinowedzerwazve, kurapwa kwemarara emumaindasitiri uye epamba kana kusimudzira kurima kwezvakatipoteredza kunobatsira kuchengetedza ivhu risina kusvibiswa. Chengetedza masewage marata mune mamiriro akanaka uye nekuvandudza kurapwa kwemvura yakasviba, pamwe nekurapwa kweanoburitswa mumaindasitiri anodzoserwa kuhunhu.
Mimwe mhinduro dzinogona kutariswa dzinogona kunge dziri:
Iva nehutano hwakanaka hwekutakura vanhu
Vanhu vanoshandisa mota kwete chete kuti zvivanakire, asiwo nekuti zvinonetsa sei kutenderera nekutakura veruzhinji mumaguta mazhinji. Kana hurumende dzikaisa mari muzvifambiso zvevoruzhinji zvinoshanda, vanhu vanenge vasingazeze kuishandisa
Kushandisa mota dzemagetsi
Motokari dzemagetsi dzave kutowanda mumaguta uye, nekuti dzinopihwa magetsi nemagetsi chete, hadziregedze chero mhando yekupinza nharaunda. Ipo iyo kuzvitonga kwaimbove dambudzikoNhasi, magetsi emagetsi emabhatiri anogara kwenguva refu, uye zvinokwanisika kuwana chiteshi chekuchaja munzvimbo dzakasiyana dzemaguta.
Dzivisa kuva nemotokari yako inomhanya kwenguva refu kana ichimira
Chiyero chaunogona kutora izvozvi. Dzivisa kumira wakamira nemotokari yako ichimhanya, nekuti munguva idzodzo mota inoshandisa huwandu hwakanaka hwemafuta, pamwe nemweya wayo wakatsaukana
Chengetedza mota yako mune yakanaka
Imotokari isiri kushanda inowanzo kusvibisa zvimwe. Kana iwe ukaita chengetedzo inoenderana pamotokari yako, unova nechokwadi kwete chete chekudzivirira matambudziko ekushanda, asi zvakare unoderedza kuburitswa kwemweya
Batsira kudzivirira kutemwa kwemasango
Kuti udzivise kusvibiswa kwevhu, matanho ekutema masango anofanirwa kuitwa nekukurumidza. Dyara miti. Kukurwa kwevhu kunokonzerwa kana pasina miti inodzivirira ivhu repamusoro kutakurwa nemhando dzakasiyana dzezvisikwa, senge mvura nemhepo.
Sarudza zvimwe zvezvinhu zvakasikwa.
Hapana mubvunzo kuti zvigadzirwa zve organic zvinodhura zvichienzaniswa nemakemikari. Asi sarudzo yezvigadzirwa zve organic inokurudzira a kugadzirwa kwehupenyu zvakanyanya. Izvi zvinokubatsira mukudzivirira kusvibiswa kwevhu.
Shandisa masaga ejira. Dzivisa kudya mapurasitiki sezvo ivo vachitora nguva yakareba kuti vaparadzane. Neraki sezvo ivo vachifanira kubhadhara mashandisiro avo akadonha zvakanyanya.
Kururamisa kurongeka kwemarara
Isu tinofanirwa kupatsanura marara zvinoenderana nekuumbwa kwawo:
Organic tsvina: chero marara ehupenyu, aimbove mupenyu kana aive chikamu chemunhu mupenyu, semuenzaniso: mashizha, matavi, husk uye zvisaririra kubva mukugadzirwa kwechikafu kumba, nezvimwe.
Inorganic vakasara: chero marara asina mavambo, emumaindasitiri mavambo kana eimwe nzira isiri yemasikirwo, semuenzaniso: plastiki, machira ekugadzira, nezvimwe.
Zvisaririra zvine njodzi: marara api neapi, angave ekuzvarwa nekubva kana kwete, ayo anogona kuita njodzi uye nekudaro anofanirwa kurapwa nenzira yakasarudzika, semuenzaniso: zvinhu zvinotapukira zvekurapa, maranzi ane radioactive, acids uye zvinokanganisa makemikari, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Ecology » Kurima kwezvakatipoteredza » Zvinokonzera uye mhedzisiro yekusvibiswa kwevhu
Delilah Rolon del Puerto akadaro
Inonakidza kwazvo, inodzidzisa, zvinoita kwandiri kuti basa iri, isu tinofanirwa kuzivisa kunzvimbo dzedzidzo, nekuti ndipo patinofanira kuomerera pacheni yezvikonzero nezvakakonzeresa! Ndatenda, zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kwandiri kuti ndiwane munhu anonditsigira
rinoenderera basa rekusimudzira kuziva.
Pindura Dalila Rolón del Puerto
kupenga sei 🙂
Pindura kuna emily_pro
Tichaona mhedzisiro yeiyo Fukushima simba renyukireya mune ramangwana, uye ichave yakakomba chaizvo. Zvese zvekusatevera kurudziro yekuchengetedza. Imwe nyaya yakakosha kusvibiswa kwehupenyu hwemumvura nekudonha kwemafuta. Chinyorwa chakanaka, chakakosha kusimudzira kuziva pakati pevanhu.
Thanks zvekare! : =)
Zvimwe zvishoma diki akadaro
Tsananguro yako inonakidza kwazvo
Pindura kune Zvimwe zvishoma cony
Ndatenda! Kwaziso huru!
Ndinoipa iyo chiuru
Maita basa, makandibatsira nebasa rangu rechikoro.
Pindura kuna sofi
zvakanaka kwazvo chirevo ichi chengeta icho kuti uone kana isu tese tichigona kuziva nezve kukuvara kwatiri kuita
Pindura kuna luismi
rosyela saldana villacorta akadaro
zvikonzero zvemushumo zvaive:
zvinhu zvine chepfu pasi pevhu
kudonha nemaune kana netsaona
Pindura rosysela saldaña villacorta
Mhoro. tsananguro yakanaka kwazvo ...
izvo zvinokonzera kukonzera kukosora kwemhuka
Pindura kuna micha2012m
Vhiri rakasvibirira akadaro
Zvinonakidza kwazvo kuti vanoidzidzisa mune ino huru chinyorwa, marara anogona kuponesa makomo edu, maguta, nzizi uye makungwa.
Tinofanira kudzidzisa munharaunda yedu kukosha kwekushandisa zvakare.
Pindura kuGreen Wheel
Maguta uye yakakwira simba rekushandisa pasirese
Renewables varikupa zvinopfuura makumi masere muzana emagetsi muNicaragua